Nyocha Arbily G9 ekwe ntị | Akụkọ akụrụngwa
Nyocha Arbily G9
Rafa Rodríguez Ballesteros | | Ngwa, Foto na ụda, Nyocha
Ọzọkwa anyị na-alaghachi na-eme nyocha nke ekweisi. Ngwaọrụ dị mkpa nke kacha wee jikọọ ekwentị anyị yana egwu kachasị amasị anyị. Oge a ka anyị na Arbily na-enye ya otu nkwuputa kachasị ọhụrụ, ekweisi ikuku Obinna G9.
A ekweisi na-enye a arụmọrụ dị elu, dị ka ngwaọrụ niile nke ụlọ ọrụ a nke anyị nwere ihu ọma iji nwalee. Onye ọzọ so na nnukwu ezinụlọ ikuku isi na-aga n'ihu na-eto. Na na dị ka anyị hụworo, ha jikwaa mma na onye ọ bụla ọhụrụ nlereanya. G9 na-akwalite na Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla. na Amazon dị ọnụ ala site na iji koodu nkwado.
1 Arbily G9, nhazi mbụ na ogo dị mma
2 Ọdịdị nke Arbily G9
3 Okwu chaja na-adọrọ adọrọ
4 Ihe di n’igbe
5 Arbily G9, teknụzụ niile ịchọrọ
6 Arbily G9 Isi nkọwa nkọwa
Arbily G9, nhazi mbụ na ogo dị mma
Mgbe anyị na-achọ ịzụta ihe, ihe ọ bụla ọ bụ, ihe dị mma bụ ịchọpụta ahịa ntakịrị tupu. Gụọ ebe a na ebe ahụ ruo mgbe ịchọta nke kachasị gị mma. Karịa ihe niile dị na mmefu ego anyị. Na ekweisi ihe anaghị adị mfe. Ugbu a Ahịa ahụ daa kpamkpam site na ụlọ ọrụ na ụdị dị iche iche na ọrụ a agaghị ekwe omume.
Ya mere, na-emekarị anyị na-ewetara gị ndị masịrị anyị. Na nke a, na ekweisi, anyị ahụla etu ụlọ ọrụ Arbily na-enye ngwaahịa ndị nwere ezigbo mma maka afọ. Karịsịa, ijikọta ogo ahụ na ọnụahịa na-esi na ya apụta na-atọ ụtọ ma dịkwa ọnụ.
na G9 Arbily nwere a mara mma imewe ma na ekweisi ma na chaja ikpe. Emepụta ma na ojii na ezigbo nguzogide, ha na-eweta a ọdịdị mara mma na nke ezi uche. Mana idebe, n'otu oge ahụ, usoro nke oge a na nke ugbu a ga-ejikọta na ụdị niile.
Ọdịdị nke Arbily G9
Anyị hụrụ ekweisi ejiri ya intraural usoro "Na ntị" nke ga-adaba na ntị n'ụzọ zuru oke. Maka nke a anyị nwere ruru pad atọ dị iche iche na anyị nwere ike ịgbanwee iji nweta ahụmịhe ọdịyo kacha mma. Ihe zuru oke zuru oke dị mkpa mgbe ị na-eji ụdị ekweisi a.
Na ná mpụta anyị hụrụ aka akụkụ nke anyị ga-enweta njikwa njikwa. Site na otu nrụgide ma ọ bụ abụọ anyị nwere ike ibugharị egwu n'ihu ma ọ bụ azụ, kwụsịtụ na-egwu ma ọ bụ zaa ma jụ oku. Ihe na anyị nwere ike hazi na-amasị anyị mfe. Ndị a abụghị anụ ahụ bọtịnụ nnọọ site na-emetụ ha aka ihe mmetụta reacts ekele a nnukwu uche.
Ihe ọzọ nke pụtara ìhè bụ elongated ọdịdị ala. Ha abughi nti chiri anya nke aru ha di n'ime nti. Anyị na-ahụ otú akụkụ dị mkpa si abịa ebe igwe okwu di. Mkpebi nke ga - eme ka ịdị mma nke ụda na mkparịta ụka anyị na - enweta ogo na nghọta doro anya n'ihi na ha dị nso n'ọnụ. Ọ bụrụ na ndị a bụ ekweisi ị na-achọ, Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla. na ọnụahịa kacha mma na Amazon. Ọzọkwa anyị nwere koodu nkwado pụrụ iche iji nweta ego ọzọ: NWANNEYF.
Okwu chaja na-adọrọ adọrọ
Ọ bụrụ na ị lelee ikpe nke Arbily G9, nke a adọta uche ya n'ichepụta ihe. Ha nwere ọdịdị pụrụ iche pụrụ iche na ekele maka a Plastic plastic siri ike na-enye echiche nke ịbụ nke eji akpụkpọ anụ. Shapedị ha na ogo ha dị ka nke zuru oke ma ha anaghị ewere ohere dị ukwuu. Na imeghe na ihu, ma nwee na azụ, dị ka ihe mgbado, na akụkụ roba nke gbagọrọ agbagọ kpamkpam.
Tụnyere ihe ndị ọzọ ụdị na anyị enwewo ike nwalee a mkpuchi bụ nke mbụ ma dị iche na nke ndị ọzọ. Ọ bụ ezie na ọhụhụ na nhazi na owuwu, anyị hụrụ ihe na-emegiderịta onwe ya. Arbily, na nke a, ekpebiela inwe a Nchaji njikọ n'ebe a a bit ochie. Ichaji batrị anyị nwere ọdụ ụgbọ mmiri Micro USB.
Ikpe Arbily G9 kwadebere nwere a 500mAh batrị. Ya mere, ndụ bara uru nke ekweisi anyị na-agbatị. Anyị nwere ike ịtụkwasị obi ruru ụgwọ ise zuru ezu ekweisi na-enweghị ịkwụnye ha na. Nnwere onwe nke na-atụle isi na ekweisi na-atọ ụtọ n'akụkụ ọ bụla anyị chọpụtara.
N'ime ikpe ekweisi na-ezu ike n'ihu na nju nke dabara ha n'ụzọ zuru oke maka ibu gị. Naanị anyị ga-emeghe okwu ahụ ka ha wee jikọọ na ekwentị anyị. Oge na-aga bụ n'ezie ngwa ngwa, ma tinye ha na ntị gị ka ha bido nụ ụtọ egwu anyị.
Jiri koodu mgbasa ozi pụrụ iche NWANNEYF ma nweta ego mbelata puru iche site na ịzụ ihe a Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla.
Metụ anya n'ime igbe nke ndị a Arbily G9. Dị ka ọ dị na mbụ, oge eruola ka anyị nwee obere ngwakọ nke ihe dị iche iche anyị nwere ike ịchọta. N’ezie, anyị nwere ekweisi. Mgbe anyị mepere igbe anyị hụrụ mbụ chaja, na n'ime ha dị ekweisi. Ha na-egosi na magnetik mkpọ na-echebe na a akara akara, ya mere ọkwa nke ụgwọ anyị ga-ahụ na mbụ ga-adị nnọọ ala ma ọ bụ ọbụna efu. Ihe na - arụ ọrụ ka ọ bụrụ na anyị anaghị ahapụ ha, batrị anaghị ere ma ọ bụ na-acha ọkụ ma ọ bụ na ọ nwere ike njọ.
Anyị nwere otu obere ndu ndu nke anyị nwere ike ịhụ otu njikwa njikwa aka si arụ ọrụ, yana ikike nhazi ha nwere. N'ime ya anyị na-achọpụtakwa ozi gbasara ụgwọ batrị nke ekweisi abụọ na nke chaja. Anyị chọtara USB njikọ USB na mmepụta maka ọdụ ụgbọ Micro Micro. Ogologo ya dị mkpụmkpụ nke na ọ dabara adaba iji jikọọ ekweisi na kọmputa ahụ.
N'ikpeazụ, anyị nwere otu mpempe akwụkwọ maka ntị, nke ya na ndị etinyegoro na ekweisi na-eme atọ dị iche iche. Ya mere, anyị nwere pad nke atọ dị iche iche (S, M na L) ka onye ọrụ ọ bụla nwee ike ịnụ ụtọ ahụmịhe kachasị mma.
Arbily G9, teknụzụ niile ịchọrọ
Arbily na - akwadebe ekweisi ya teknụzụ kachasị ọhụrụ nke oge a. N'ihi ya, ha nwere ike ibuso gị agha megide onye ọ bụla na-ama gị aka. Arbily G9 nwekwara teknụzụ kachasị ọhụrụ. N'ihi nke a, ojiji ha nwere afọ ojuju ma ha ga - enwe ike igbo mkpa onye ọrụ ọ bụla na - enweghị ndị ọzọ. Anyị nwere ihe niile anyị nwere ike ịchọ nke ekweisi na ọnụahịa a na-apụghị imeri emeri. Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla. ma jiri koodu ego NWANNEYF ịzụta ha ọbụna dị ọnụ ala karịa.
Ihe nkọwa dị mkpa maka eriri ekweisi bụ ọkwa olu na ha ruru. Ọ bụ ngwa anyị na-ejikarị eme egwuregwu ma ọ bụ Mgbe anyị jere n'okporo ámá Ya mere, ịnwe ike ịnụ ụtọ egwu na-enweghị mkpọtụ mpụga bụ ihe a ga-atụle. Na Arbily G9 ịkwesighi ichegbu onwe gị banyere mkpọtụ, ọkwa olu ya bụ karịa ezughị ezu ka ihe ọ bụla ma ọ bụ onye ọ bụla ghara inye gị nsogbu. Ike, ịdị mma na ụda dị mma,
Anyị chọtara a Kacha ọhụrụ na mgbawa na awade Bluetooth 5.0 njikọ. A nkọwa na na-ekwe nkwa njikọ na mgbaàmà na-enweghị nsogbu kwụsie ike. Anyị nwere ike ịnụ ụtọ ụda kachasị mma ọ ruru mita iri nke ngwaọrụ anyị. Kwaga kpamkpam n'ụlọ ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-enweghị na-ebu gị ama.
Ekwentị ọ bụla Ọ nwere ihe onwe ha batrị nke 50 mAh na ọnụ na-enye a nnwere onwe nke awa 4 nke egwu ma ọ bụ egwu mkparịta ụka. N'ihi ya chaja ikpe anyị nwere ike quintuple ya oge. Ya mere, anyị nwere ike ịnụ ụtọ rue egwu 20 nke egwu na-enweghị nkwụnye na.
Anyị agaghị echegbu onwe anyị maka splas nwere ike ịda ma ọ bụrụ na anyị gaa ịgba ọsọ n'ụbọchị mmiri na-ezo. Ma ọ bụ site na ọsụsọ nke anyị mgbe anyị na-emega ahụ. The Arbily G9 bụ nyere onyinye IPX5 na mgbakwunye na nchebe megide mmiri mmiri na-emekwa ka ha nwee nchebe pụọ n'ájá.
Arbily G9 Isi nkọwa nkọwa
Ogologo oge ruo mita iri
Akpaaka akpakọrịta SI
Njikwa aka SI
Batisi ekweisi 50 mAh
Ihe batrị / chaja 500 mAh
Isi okpu ruo awa 4
Igbe kwụụrụ onwe ya ruo 5 zuru ụgwọ cycles
Total arọ nke set 141 g
Akụkụ X x 11.4 11.2 3.5 cm
Ahịa 45.99 €
Linkzụta njikọ Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla.
Koodu ego NWANNEYF
El olu larịị na kacha karịa karịa ezuru nke mere na ọ dịghị mkpọtụ mpụga na-egbochi mgbe anyị na-anụ ụtọ egwu anyị. Ọ bụrụ na ị na-achọ ike, ekweisi ndị a na-amasị gị.
Nnwere onwe nke ruo awa 20 nke egwu nwere ebubo ise zuru ezu nke ekweisi na-enweghị mkpa ịtinye ha.
Nguzogide na IPX5 asambodo iguzogide ọsụsọ, splas ma ọ bụ ájá.
El imewe enwekwara ogologo na igwe na-arutu aka na - eme ka mkparita uka na enyeghi aka kwalite.
Ike oke kachasị
La mpaghara roba Azụ nke ikpe nwere ike gbarie na ojiji. Anyị amaghị otú ọ ga-esi guzosie ike na oge na-aga n'ihu "mepere ma mechie".
El Na usoro ntị ugbu a ọ bụ ka ọ bụghị nke uto nke ndị ọrụ niile na ụfọdụ ọ nwere ike ịbụ isi ọjọọ.
Na-adịghị ike mgbabere uzo
Na usoro ntị
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nyocha » Nyocha Arbily G9